Yini i-anemometer: izici, izinhlobo, izinhlelo zokusebenza nokubaluleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Sihlale sihumusha umoya njengokuhamba komoya usuka kwenye indawo uye kwenye futhi, ngaphandle kokuthi uthwele isihlabathi noma izinto zokwakha, asikwazi ukuwubona. Ukulangazelela kwabantu emoyeni kuvela ekutheni ungalinganisa kanjani lokho esingakuboni. I- i-anemometer Yithuluzi lokulinganisa elisetshenziselwa ukukala umoya namandla awo. Ingesinye sezinsimbi zezulu ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni kwezemeteorology.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela ukuthi iyini i-anemometer, izici zayo kanye nokusebenziseka kwayo.
1 Yini i-anemometer
3 Izinhlobo zama-anemometers
5 Isebenza kanjani
6 Ukubaluleka kwe-anemometer
I-anemometer ilinganisa isivinini somoya osheshayo, kepha ukuqhuma kungaphambukisa imiphumela yokulinganisa, ngakho-ke isilinganiso esinembile kunazo zonke isilinganiso sezilinganiso ezithathwa njalo emizuzwini eyi-10. Ngakolunye uhlangothi, i-anemometer isivumela ukuba silinganise ngokushesha isivinini esiphezulu somoya ovunguzayo. Kungakho ilungele kakhulu imisebenzi yasolwandle.
Ngenxa yalezi zinsimbi zesimo sezulu siyakwazi ukushesha komoya. Ezisetshenziswa kakhulu yilezi ezibizwa ngamawindlass. Balinganisa ijubane nge-km / h. Lapho umoya 'ushayisana' ne-windlass, uyaphenduka. Amathanga enziwe afundwa yikhalatha noma okurekhodwe ebhendini lephepha uma kuyi-anemograph.
Ukukala isivinini somoya ovundlile, ithuluzi elisetshenziswa kakhulu yi-anemometer yenkomishi, lapho ukuzungezisa izinkomishi kulingana nesivinini somoya. Iyunithi yokukala yi-km / h noma m / s.
Izici ezibonakalayo ze-anemometer ziyahlukahluka kakhulu ngenxa yokubukeka kwayo, kepha njengokujikeleza okusetshenziswe kakhulu, kufanele wazi ukuthi inensingo emzimbeni wayo, amanye ama-popsicles noma izinkomishi ekugcineni, nesifuba esifana nomlandeli. kungenxa yezibalo zejubane lomoya.
Yize ezinye izinhlobo zinikeza ushintsho olukhulu kumodeli yasekuqaleni nezithombe, ukusebenza kwazo akukashintshi. Konke kunikela ngesilinganiso sokushesha koketshezi olunegesi. Vele, ezinye zinembe kakhulu kunezinye.
Ukusetshenziswa kwayo kuyasebenza kakhulu, idatha oyinikezayo iyasiza kakhulu, futhi njengoba kungabizi kakhulu, noma ngubani angajabulela izinzuzo zayo, okwenza leli thuluzi lokulinganisa libe isisekelo sempilo yansuku zonke neyomsebenzi wabantu abaningi.
Kunezinhlobo eziningi zama-anemometers. I-thrust yakhiwa nge-sphere engenalutho futhi elula (i-Daloz) noma i-paddle (i-Wild) isikhundla sayo esihlobene nephuzu lokumiswa lishintsha nomoya, olinganiswa nge-quadrant.
I-anemometer ejikelezayo ifakwe inkomishi (iRobinson) noma uphephela oxhunywe kushaft ephakathi. Ukujikeleza kwayo kulingana nesivinini somoya futhi kungarekhodwa kalula; Ku-anemometer kazibuthe, le spin isebenzisa i-microgenerator ukusiza ngokunemba. Ukulinganisa.
I-anemometer yokuminyanisa isuselwa kuthubhu yePitot futhi inamashubhu amabili amancane, elinye lawo linomgodi wangaphambili (wokulinganisa ingcindezi enamandla) nembobo eseceleni (yokulinganisa ingcindezi emile), kanti enye inembobo eseceleni kuphela. Umehluko phakathi kwengcindezi elinganisiwe ivumela isivinini somoya ukuthi sinqunywe.
Ama-anemometer ashibhile ngokumangazayo angathengwa kwabanye babathengisi abakhulu emakethe. Lapho kudingeka ukucacisa okuphezulu, lawa ma-anemeter angalungela ukusetshenziswa kwezimo zezulu futhi afakwe kuma-wind turbines. (Imvamisa kusetshenziselwa kuphela ukuthola ukuthi ngabe kunomoya owenele yini ongawuqala)
Kodwa-ke, ama-anemometers ashibhile awasizi ngalutho ukukala isivinini somoya embonini yamandla omoya ngoba angaba nephutha kakhulu futhi angalinganiswa kahle, futhi iphutha lokulinganisa lingaba yi-5% noma i-10%. Ungathenga i-anemometer yobuchwepheshe obulinganiselwe kahle ngentengo ephansi futhi iphutha layo lokulinganisa cishe lingu-1%.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezicelo ze-anemometer ezicini ezahlukahlukene. Ake sibone ukuthi yiziphi okuyizona eziphambili:
Ukulima: Bheka izimo zokufafaza izitshalo noma utshani obushisayo.
Ukundiza: ibhaluni lomoya oshisayo, i-glider, i-hang glider, i-microlight, i-parachute, i-paraglider.
Ubunjiniyela: ukuphepha kokwakhiwa, izimo zokusebenza, ukusebenza kwe-crane ephephile, ukukalwa komoya.
Ukuqeqeshwa: ukulinganisa nokuhlolwa kokugeleza komoya, ukuhlolwa kwezimo zangaphandle zemidlalo yezikole, ucwaningo lwezemvelo.
Ukuqothulwa: Kubonisa ubungozi bokusabalala komlilo.
Ukushisa nokungenisa umoya: isilinganiso sokugeleza komoya, hlola isimo sesihlungi.
Ukuzilibazisa: imodeli yendiza, imodeli yomkhumbi, ukuhamba kite.
Umkhakha: Ukulinganiswa kokugeleza komoya, ukulawula ukungcola.
Ama-activates al aire mahhala: ukudubula ngomnsalo, ukuhamba ngebhayisikili, ukudubula, ukudoba, igalofu, ukuhamba ngomkhumbi, ukusubatha, ukukhempa, ukuhamba izintaba, ukukhweza izintaba.
Sebenza phesheya: ukuhlolwa kwesimo.
Kungashiwo ukuthi uhlobo olusetshenziswa kakhulu lwe-anemometer uhlobo lwenkomishi, olubala isivinini somoya ngokubala inani lezinguquko ezirekhodiwe, kuvezwe ngamamitha ngomzuzwana (m / s).
Olunye uhlobo lwe-anemometer yi-filament anemometer eshisayo, esetshenziswa ngokuyinhloko ekushintsheni kwejubane okungazelelwe. Lolu hlobo lwe-anemometer lwakhiwa ngocingo lweplathinamu noma lwentambo ye-nickel esetshenziswa ngogesi futhi lapho luvezwa ukuvunguza komoya, izinga lokushisa kwentambo lizoshintsha ukuhlinzeka ngemininingwane edingekayo.
Ngale ndlela sizothola ukufundwa, kepha uma sifuna idatha ibe yizilinganiso, kuyadingeka ukuthi siveze idivayisi imizuzu eyi-10 ukuthola umkhawulo omuhle wokubala, ngoba uma uvivinya isivinini somoya imizuzwana embalwa, kungahle kube kuphela linganisa ukuvunguza komoya, hhayi ukugeleza komoya okukhulu njalo.
Ukubaluleka kwaleli thuluzi kubonakala kunani elikhulu lezinkambu noma imisebenzi elingasetshenziswa kulo. Noma kungenakusetshenziswa okuningi, ukulinganiswa kwejubane lomoya kubonisa idatha ewusizo kakhulu yemisebenzi eminingi, ngakho-ke ithatha indawo ebalulekile. Isilinganiso sensimbi.
Njengoba umoya uyinto ebalulekile ezimeni eziningi noma emisebenzini, ukulinganiswa kwayo kuyinzuzo ebalulekile, ngenxa yale nsimbi singaluqonda kalula ulwazi futhi intengo iyabiza kakhulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi yini i-anemometer nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izinsimbi Zomkhathi » Yini i-anemometer
Iphutha likaSan Andrés